Xal loo helay dhibaato heysatay hooyooyinka Soomaalida ee Mareykanka - Aayaha
Home»CAAFIMAADKA»Xal loo helay dhibaato heysatay hooyooyinka Soomaalida ee Mareykanka
Xanuunka loo yaqaanno Autism oo waxyeello u geysta koritaanka maskaxda carruurta ayaa dhibaato weyn ku haya hooyooyinka Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka, kuwaasoo howlahooda oo dhan kusoo koobay iney la tacaalaan sidii ay carruurtooda waxbarasho ugu heli lahaayeen, hase ahaatee waxay u muuqataa iney hadda xal heleen.
Cilmi baaris ay sannadkii 2015-kii sameysay Jaamacadda Minnesota ayaa lagu sheegay in xanuunka Autism uu aad ug u badan yahay carruurta kasoo jeeda qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaas.
Guud ahaan dalka Mareykanka waxaa cudurkan qabta ilaa 3 milyan oo carruur ah, halka tirada carruurta Soomaalida ah ee cudurkaas la nool lagu qiyaaso 19,000.
570 ka mid ah carruurta Soomaalida ee la buka xanuunkan ayaa hela waxbarasho, waxaana inta badan waalidiinta ay caqabado kala kulmaan iskuullada oo ilmahooda xanuunsan dib u soo celiya.
Waxaa sidoo kale jira isfaham waa dhinaca luuqadda ah oo u dhaxeeya hooyooyinka Soomaaliyeed ee aan si wanaagsan u aqoonin af ingiriiska iyo macallimiinta iskuullada.
Dhammaan arrimahan ayaa horseeday in waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka ay heli waayaan fursado ay ku shaqeeyaan ama dano kale ku fushadaan, maadaama uu wakhtigooda oo dhan ku idil yahay dadaalka ku aaddan sidii ay waxbarasho ugu heli lahaayeen carruurtaas.
“Waxaan daryeelnaa Autism”
Hase ahaatee hadda waxay u muuqataa in xal loo helay dhibaatadaas baaxadda leh ee heysatay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka, sida uu ku soo warrmay wariyaha BBC-da ee ku sugan halkaas.
Gabar Soomaali-Mareykan ah oo lagu magacaabo Miski Maxamuud ayaa aasaastay xarun lagu magacaabo “We Care Autism”, oo micnaheedu yahay “waxaan daryeelnaa Autism”.
Xaruntan oo u dhisan Iskuul ahaan ayaa ka kooban dhowr fasal oo loogu tala galay in lagu xannaaneeyo islamarkaana wax lagu baro carruurta qabta xanuunka Autism-ka.
Waa iskuulka kaliya ee ay Soomaali maamusho, oo loo furay carruurta ay heysato dhibaatada dhinaca koritaanka maskaxda.
Miski oo BBC-da la hadashay ayaa sheegtay in ay jirtay baahi kalliftay iney xaruntaas abuurto.
“Waxaan arkay in maamulladii iskuulladana ay leeyihiin ma dooneyno inaan carruurtan qaabilno, waalidiintiina ay leeyihii iskuulladu waa cunsuriyiin. Marka waxaan go’aan ku gaaray inaan furo xarun aan aniga leeyahay oo wax lagu baro carruurta la xanuunsan Autism-ka, maadaama ay hooyooyinka Soomaaliyeed aniga luqaddeyda fahmayaan anigana aan fahmayo luuqaddooda”.
Mid ka mid ah waalidiinta daggan gobolka Minnesota, oo lagu magacaabo Muuse Kacaan ayaa BBC-da u sheegay in tallaabadan horumarka leh ay soo dhaweeyeen maamulka gobolka.
“Mas’uuliyiinta gobolka ayaa xitaa nagu ammaanay in xarun ay soomaali leedahay laga furo halkan, si loogu daryeelo carruurtaas. Muhiimadda noogu weyn waa in carruurta la daryeelo. Aniga Aabe ayaan ahay waxaana ogahay in carruurta ay u aabah yihiin iney helaan wax kasta oo ay xaq u leeyihiin”.
Xaawo Faarax, waxay ka mid tahay hooyooyinka Soomaali-Mareykanka ah ee dhibaatadu ay ka heysato wax baridda carruurtooda qaba cudurka Autism-ka.
Iyadoo la hadleysay BBC-da ayey tiri: “3 Iskuul oo hore ayaan wiilkeyga geeyay, mid walbana markii uu dhowr bilood dhigto ayaa laga soo eryayay. Waxaan awoodi waayay inaan shaqeysto ama wax barto, sababtoo ah asaga ayaan 24 saac ku mashquulsanaa sidii aan waxbarasho ugu heli lahaa. Hadda waxaan keenay xarunta ay Soomaalida fureen waana ku qanacsanahay”.
Qaar ka mid ah carruurtan ayaa la sheegay iney leeyihiin fahmad ka sarreysa midda ilmaha caafimaadka qaba, balse ay u baahan yihiin in fursado la siiyo oo kaliya.
Want to become irresistible to your husband? Try these 3 things
4 Talo Oo Kaa Caawinaya Inaad Si Caqli Iyo Taxadar Leh Aad U Doorato Xaas Wanaagsan